S60 Smart hidy
S60 dia endrika vaovao amin'ny hidy varavarana marani-tsaina, nampiasa ny firafitra farany, mety ho an'ny varavarana aliminioma 30mm-80mm rehetra, varavarana hazo ary varavarana fiarovana. Mandritra izany fotoana izany mifanaraka amin'ny mortise isan-karazany. 6 mamoha fomba, izay azo ampifandraisina amin'ny telefaona finday amin'ny alàlan'ny WIFI na Bluetooth, ary afaka mitantana ny hidim-baravarana marani-tsaina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ampiasaina eran'izao tontolo izao izy io.
H50 Smart hidy
H50 dia hidy varavarana feno fahendrena mandeha ho azy vita amin'ny firaka zinc miaraka amina teknolojia mandeha ho azy vaovao hamaha sy hidiana varavarana nefa tsy ampiasain'ny tananao. 6 fomba hamoha, izay azo ampifandraisina amin'ny telefaona finday amin'ny alàlan'ny WIFI na Bluetooth, ary afaka mitantana ny hidim-baravarana marani-tsaina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Hitondra anao fiainana mahira-tsaina mahavariana.
H10 Smart hidy
Volavola tsotra sy kanto, Mandritra izany fotoana izany mifanaraka amin'ny karazana mortise. 6 fomba hamoha, izay azo ampifandraisina amin'ny telefaona finday amin'ny alàlan'ny WIFI na Bluetooth, ary afaka mitantana ny hidim-baravarana marani-tsaina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra